Sergio Ramos oo bartay xirfad cusub intii lagu gudo jiray karaantiilka – Gool FM
(Madrid) 05 Maaajo 2020. Ciyaartoyda kubadda cagta ayaa siyaabo kala duwan uga faa’ideystay maalmaha ay dunida u kala xiran tahay faafaha coronavirus awgiis, kaasoo si ba’an u ragaadiyay waddamo badan oo dunida daafaheeda dhaca.
Inta lagu gudo jiro maalmaha karaantiilka, kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa bartay garaacidda Piano-da.
Difaaca Isbaanishka ah ayaa muuqaal uu iska soo duubay isagoo garaacaya piano soo galiyay baraha bulshada, waxaana uu ku ciyaarayay heesta ‘What a wonderful world’ oo uu iska leeyahay hobolka Mareykanka ka soo jeeda ee Louis Armstrong.
Markii uu soo galinayay muuqaalkan barta Instagram-ka, Ramos ayaa qiray inuusan waligiis isku dayin ciyaaridda piano-da ka hor maalmahan karaantiilka.
“Waligey ma aanan ciyaarin piano nolosheyda, balse tallaabo ka tallaabo,” qoraal ah ayuu soo raaciyay Halyeyga Los Blancos muuqaalkii uu la wadaagay taageerayaashiisa.
Lautaro Martinez oo iska diiday inuu wadahadallo heshiis kordhin ah la galo Kooxdiisa Inter Milan